Ezekieri 37: Zvinorehwa neTutanda twaJudha naEfremu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mixe (North Central) Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Kubatanidzwa kwetutanda tuviri kunotaurwa muchitsauko 37 chaEzekieri kunorevei?
Jehovha akapa Ezekieri mashoko etariro achivimbisa kuti vanhu verudzi rwaIsraeri vaizobatanidzwa pashure pekunge vadzokera kuNyika Yakapikirwa. Mashoko iwayo aifanotaurawo nezvekubatanidzwa kwevanhu vaMwari kwakatanga kuitika mumazuva ekupedzisira.
Jehovha akaudza muprofita wake Ezekieri kuti anyore mashoko patutanda tuviri. Aifanira kunyora pane kamwe katanda kuti: “Nokuda kwaJudha uye nokuda kwevanakomana vaIsraeri, idzo shamwari dzake,” uye pane kamwe kacho kuti: “Nokuda kwaJosefa, katanda kaEfremu, neimba yose yaIsraeri, idzo shamwari dzake.” Tutanda tuviri utwu twaizova “katanda kamwe chete” muruoko rwaEzekieri.—Ezek. 37:15-17.
Zita rekuti “Efremu” rinomiririrei? Mambo wekutanga weumambo hwokuchamhembe hwemadzinza gumi, Jerobhoamu, aiva wedzinza raEfremu, iro rakanga rava nesimba kupfuura mamwe madzinza ose. (Dheut. 33:13, 17; 1 Madz. 11:26) Dzinza iri raiva remwanakomana waJosefa ainzi Efremu. (Num. 1:32, 33) Josefa akanga apiwa chikomborero chakakura nababa vake Jakobho. Saka zvakanga zvakakodzera kuti katanda kaimiririra umambo hwemadzinza gumi kanzi “katanda kaEfremu.” Ezekieri paakanyora uprofita hune chekuita netutanda tuviri, umambo hwaIsraeri hwekuchamhembe hwakanga hwava nenguva refu hwatapwa nevaAsiriya muna 740 B.C.E. (2 Madz. 17:6) Saka panguva iyoyo, vazhinji vevaIsraeri vakanga vakapararira muUmambo hweBhabhironi, uhwo hwakanga hwatsiva Umambo hweAsiriya.
Muna 607 B.C.E., umambo hwekumaodzanyemba hwemadzinza maviri uye zvichida vamwe vainge vasara veumambo hwekuchamhembe vakatapwa vakaendeswa kuBhabhironi. Madzimambo aitonga madzinza maviri aya aiva erudzi rwaJudha, uye vapristi vaigara muJudha nokuti vaishumira patemberi yaiva muJerusarema. (2 Mak. 11:13, 14; 34:30) Saka zvakanga zvakakodzera kuti umambo hwemadzinza maviri humiririrwe nekatanda kakanzi “nokuda kwaJudha.”
Tutanda tuviri utwu twekufananidzira twakabatanidzwa riini? Twakabatanidzwa vaIsraeri pavakadzokera kuJerusarema muna 537 B.C.E. kuti vanovakazve temberi. Vamwe vanhu veumambo hwemadzinza gumi nevamwe veumambo hwemadzinza maviri vakadzokera kuJerusarema. VaIsraeri vakanga vasisina kukamurwa. (Ezek. 37:21, 22) Vakanga vabatana zvekare pakunamata Jehovha. Kuyanana uku kwakanga kwafanotaurwawo naIsaya naJeremiya.—Isa. 11:12, 13; Jer. 31:1, 6, 31.
Uprofita uhwu hunobudisa pachena chokwadi chipi chinokosha pamusoro pekunamata kwakachena? Chokwadi chacho ndeichi: Jehovha achaita kuti vanamati vake vave “chinhu chimwe chete.” (Ezek. 37:18, 19) Vimbiso iyi yekubatana yakazadzika here munguva yedu? Hongu yakazadzika. Uprofita uhwu hwakatanga kuzadzika muna 1919, vanhu vaMwari pavakarongwa patsva zvishoma nezvishoma uye pavakabatanidzwazve. Kuedza kwaiita Satani kuvaparadzanisa zvachose kwakashaya basa.
Panguva iyoyo, vazhinji vevakanga vabatanidzwazve vaiva netariro yekuzova madzimambo uye vapristi pamwe chete naJesu kudenga. (Zvak. 20:6) Nenzira yekufananidzira, vakanga vakaita sekatanda kaJudha. Zvisinei, nekufamba kwenguva, vakawanda vevaya vane tariro yekurarama pasi pano vakatanga kubatanawo nevane tariro yekuenda kudenga. (Zek. 8:23) Vakanga vakaita sekatanda kaJosefa, uye vakanga vasina tariro yekutonga naKristu.
Iye zvino, mapoka maviri aya ari kushumira akabatana sevanhu vaJehovha vari pasi paMambo mumwe chete, Jesu Kristu, uyo anotaurwa nezvake muuprofita achinzi “mushumiri wangu Dhavhidhi.” (Ezek. 37:24, 25) Jesu akanyengetera kuti vateveri vake ‘vose vave vamwe, saBaba vake vari pamwe naye uye iye ari pamwe naBaba vake.’ * (Joh. 17:20, 21) Jesu akataurawo kuti boka duku revateveri vake vakazodzwa raizova “boka rimwe chete” ‘nemamwe makwai.’ Vose vaizova pasi “pomufudzi mumwe chete.” (Joh. 10:16) Mashoko aJesu anonyatsoratidza kubatana kwevanhu vaJehovha mazuva ano pasinei nekuti vane tariro ipi yeramangwana.
^ ndima 6 Jesu paaitaura nezvechiratidzo chemazuva ekupedzisira, akataura mifananidzo yakati kuti. Akatanga kutaura ‘nezvemuranda akatendeka, akangwara,’ boka duku rehama dzakazodzwa dzaizotungamirira. (Mat. 24:45-47) Akabva azotaura mifananidzo yainyanya kunangana nevose vane tariro yekuenda kudenga. (Mat. 25:1-30) Pakupedzisira, akataura nezvevaya vane tariro yekurarama pasi pano, avo vaizotsigira hama dzaKristu. (Mat. 25:31-46) Saizvozvowo, kuzadzika kweuprofita hwaEzekieri mazuva ano kwakatanga kuitika kune vaya vane tariro yekuenda kudenga. Kunyange zvazvo umambo hwemarudzi gumi husingawanzofananidziri vaya vane tariro yekurarama pasi pano, kubatanidzwa kunotaurwa muuprofita uhwu kunotiyeudza nezvekubatana kwevaya vane tariro yepasi pano nevaya vane tariro yekudenga.
Mibvunzo Inobva Kuvaverengi​—July 2016